चलचित्र छायांकनको दौडधुपमा यी ६ स्टार, हल नखुल्दै केमा छन् व्यस्त ?
लकडाउनका कारण चलचित्र क्षेत्र पनि बिरामी पर्‍यो । चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएका सबै गतिविधि ८ महिना बन्द हुँदा करोडौं घाटा भएको छ । चलचित्र उद्योगमा क्रियाशिल हजारौंले रोजीरोटी गुमाएका छन् ।
अब भने लकडाउन खुल्यो, यसले धेरैको आशा जगाएको छ ।
चलचित्र क्षेत्र बिस्तारै खुलेको छ । तर, फिल्म हल कहिले खुल्छन् अड्कल लगाउन मुस्किल छ । तथापि, चलचित्रको छायांकन र यससँग जोडिएका विभिन्न गतिविधि भने शुरू भइसकेका छन् ।
हल खुलिसकेपछि कुन चलचित्र शुरूमा प्रदर्शन गरिन्छ ? त्यो पक्का छैन । तर, अब हलमा दर्शक जर्बजस्त तानिनुपर्छ । र, त्यसका लागि इनिसियल रुपमा दर्शक तान्न सक्ने स्टारको शुरूमै खाँचो पर्छ । यदि तुरुन्तै चलचित्र हल खुल्यो भने स्टारडम बोकेका पछिल्लो समयका हिरोहरूका खासै चलचित्र छैनन् । तर, ढिलोचाँडो भने प्रदर्शन हुनेवाला छन् ।
पछिल्लो समयका लोकप्रिय अभिनेता अनमोल केसी यतिबेला ‘ए मेरो हजुर ४’ को छायांकनमा व्यस्त छन् । लकडाउनका कारण रोकिएको यो चलचित्रको छायांकन दशैंको घटस्थापनाका दिनदेखि शुरू भएको हो ।
झरना थापाको निर्देशनमा तयार भइरहेको यो चलचित्रपछि अनमोल होमप्रोडक्सनको ब्यानरबाट निर्माण हुने चलचित्र ‘पारस’मा व्यस्त हुनेछन् । यो चलचित्रलाई माधव वाग्लेले निर्देशन गर्दैछन् ।
त्यसपछि अनमोल होम प्रोडक्सनकै अर्को चलचित्र ‘एन्टी हिरो’मा पनि व्यस्त हुनेछन् । यो चलचित्रको इन्टरनेशनल राइट्स भने बिक्री भइसकेको छ ।
अर्का लोकप्रिय अभिनेता प्रदिप खड्काको चलचित्र लिस्ट पनि राम्रै छ । उनी २०७७/२०७८ मा निकै व्यस्त हुने देखिन्छन् । प्रदिप भन्छन्, ‘केही चलचित्र लाइनमा छन्, केही साइन गरिसकेको छु । साइन गरिसकेका चलचित्रको छायांकन सकेपछि मात्रै अन्य चलचित्रको सम्झौता गर्ने योजना गराएको छु,’ प्रदिप आफैंका लागि र उनको करिअरको सबैभन्दा उत्कृष्ट चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’ प्रदर्शन कहिले हुन्छ पक्का छैन ।
अघिल्लो चैत २८ मा प्रदर्शन हुने भनिएको यो चलचित्र कोभिड १९ कै कारण रोकिएको थियो । बुझिएअनुसार आगामी नयाँ बर्ष अथवा दशैंको समयमा यो चलचित्र प्रदर्शन गर्ने यसका निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनको योजना छ ।
प्रदिप अब ‘हुतुतु’, त्यसपछि दिनेश राउतको निर्देशनमा बन्ने अर्को चलचित्रमा काम गर्नेछन् । त्यस्तै उनी हेमराज बिसीको चलचित्रमा पनि काम गर्ने चर्चा छ ।
म्यूजिक भिडियोमा निकै व्यस्त पल शाह चलचित्रका लागि पनि भरपर्दा अभिनेता हुन् । पल अभिनित चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ प्रदर्शनको तयारीमा छ । त्यस्तै उनको अर्को चलचित्र ‘हृदयभरी’ पनि प्रदर्शन हुने तयारीमा छ ।
पल अब छिट्टै फ्लोरमा जान लागेको ‘हुतुतु’मा पनि काम गर्नेछन् । लकडाउनकै कारण छायांकन रोकिएको ‘२ नम्बरी’मा पनि पलले यसैवर्ष काम गर्नुपर्नेछ । पल भन्छन्, ‘रोकिएका चलचित्रको छायांकन शुरू गर्ने र केही नाम नखुलाइएका प्रोजेक्टको स्क्रिप्ट पनि पढ्नुपर्ने छ ।’
अभिनेता पुष्प खड्का छिट्टै एक्सन जनराको चलचित्रमा काम गर्नेछन् । एकपछि अर्को हिट चलचित्र दिएर दर्शकको रोजाइमा परेका पुष्पले लकडाउन अघि ‘चालबाज’को छायांकन सकेका छन् ।
उनले छिट्टै छायांकनमा जान लागेको ‘कृष्ण लीला’ मा पनि काम गर्दैछन् । यद्यपी ‘कृष्ण लीला’को काम सकिएपछि मात्रै पुष्पले एक्सन जनराका चलचित्रमा काम गर्नेछन् । यो चलचित्रलाई मुकुन्द भट्टले निर्देशन गर्दैछन् ।
चलचित्रको सम्पूर्ण दृश्य विदेशमा छायांकन गरिने छ । ग्याङस्टार कथामा आधारित चलचित्रमा काम गर्न पाउँदा पुष्प निकै खुशी छन् ।
पुष्प भन्छन्, ‘यो चलचित्रका लागि ५–६ महिना एक्सनको ट्रेनिङ समेत लिनेछु । त्यसपछि मात्रै छायांकनमा शुरू हुनेछ । एक्सन चलचित्र काम गर्ने ठूलो रहर थियो । अब पूरा भएको छ ।’
सर्वाधिक लोकप्रिय चलचित्र मानिन्छ, ‘प्रसाद’ । यसका अभिनेता विपिन कार्की चलचित्र उद्योगका सबैभन्दा भरपर्दा अभिनेता हुन् । ‘मसँग १६ वटा जति चलचित्रको स्क्रिप्ट हात परिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब विस्तारै काम गर्दै जाने योजना बनाएको छु । तर, कुनैपनि चलचित्र साइन गरिसकेको छैन ।’
विपिनले साइन गरिसकेको चलचित्र भने ‘प्रसाद २’ मात्रै हो । यो चलचित्रपछि उनले नारायण वाग्लेको पल्पसा क्याफे किताबमा आधारित नाटक पनि गर्नेछन् ।
यो नाटकमा स्वस्तिमा खड्कासँग काम गर्दैछन् । ‘म बाँचेर मात्रै हुँदैन, अब चलचित्र क्षेत्र पनि बाच्नुपर्छ’, विपिन भन्छन्, ‘त्यसका लागि अब मलाई अफर आएका चलचित्र छानेर काम गर्नुपर्छ । म काम गर्दा धेरै टेक्निसियल, प्राविधिक, नयाँ कलाकारहरू र धेरै बाँच्ने आधार बन्न सक्छ ।’
नाजिर हुसेनको लोकप्रियता पनि लोभलाग्दो छ । आफुलाई स्टारभन्दा पनि कलाकार भन्न रुचाउने नाजिरका लागि पनि चलचित्रको लाइन छ । तर, उनले अब धेरै सोचेर मात्रै चलचित्र साइन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
हालै उनले चलचित्र ‘चिलगाडी’ साइन गरिसकेका छन् । त्यस्तै सन्तोष सेनको ‘हुतुतु’मा पनि उनी व्यस्त हुनेवाला छन् ।
नाजिरले चलचित्रको कामपछि आफ्नै लेखन र निर्देशनमा एउटा नाटक पनि घोषणा गर्ने योजना गराएका छन् । यद्यपी, नाटकको समयमा भने कुनै चलचित्रको छायांकन र यसका अन्य गतिविधीमा व्यस्त नहुने नाजिरले सुनाए ।
नाजिर भन्छन्, ‘धमाधम काम गर्ने योजना छ । ‘केही चलचित्रको साइन गरिसकेको छु, ती चलचित्रको काम हुँदै जान्छ । त्यसबाहेक अर्को एउटा प्रोजेक्टको पनि कुरा भइरहेको छ । सायद केही हप्ताभित्रै यो चलचित्रबारे सबै कुरा सार्वजनिक हुन सक्छ ।’
स्टोरी राम्रोसँग पढेर, निर्देशक बुझेर र स्टोरी र दर्शकको चाहना बुझेर अबको चलचित्र यात्रामा दौडिने नाजिरको योजना छ ।
किम्फ फिल्म फेस्टिभल आगामी साताबाट, भिमिओमा हेर्न म...
कंगना झन विवादमा फस्दै, मिकाले भने, ‘अभिनय गर, ...